Wholesale muto spouted homwe Manufacturer uye mutengesi | Yingzhicai
muto wakaburitsa homwe
Chinhu homwe yemuto
Mashoko PETI / PETARI / PE
PET // NY / PE
Kushandisa Inokodzera muto Soy muto, unopisa muto, madomasi muto, saradhi kupfeka, etc.
Kudhinda Kudhinda mifananidzo yakapihwa nevatengi kana yakagadzirirwa nevakagadziri vedu
1.The 500g simuka homwe pamwe muromo akaita chakagadzirwa PET / AL / Pe chikafu giredhi zvinhu. Iyo ine yakanaka mwenje-chiratidzo uye yakakwira chipingamupinyi cheunyoro, yepamusoro puncture kuramba. Inoshandiswa zvakanyanya kune ketchup uye muto.
Iyi yakasarudzika spout homwe bhegi ine yakanakisa chitarisiko uye yakanakisa masherufu ekuratidzira mhedzisiro, izvo zvinoita kuti iratidzike yemafashoni uye inoyevedza.
Iyo ketchup yekuvhara bhegi ine kamwene pakona kuti ishandiswe nyore zuva nezuva, uye inogona kuvhurwa kuti irambe iri nyowani.
Iwe unogona kuve neyako dhizaini, maitiro uye kukumbira kwezvinhu Dhizaini yemifananidzo fomati inofanirwa kuve AI, CDR kana PDF yekugadzira humburumbira.
2.Product Rondedzero Item Tsika yakadhindwa nzungu / suace bhegi ine vharuvhu saizi 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg kana yakagadziriswa Mati Mat kana glossy nzvimbo ine foil yakamisikidzwa kana yakagadzirirwa Ukobvu 100-150 ma microns / padivi kana yakagadzirirwa Feature Zip Lock, foil yakamisikidzwa , yakakwenenzverwa pamusoro peKubata Gravure kudhinda OEM Hongu MOQ Zvidimbu makumi matatu.
3.This yakadhindwa Plastic simuka homwe yenzungu muto, Zvakajairwa epurasitiki zvinhu zvinowanikwa iwe neako logo.
Iwo mabhegi anogona kunge aine hwindo kumutengi wako kuti aone chigadzirwa mukati, izvo zviri uye zvinowedzeredzwa uye giredhi rekudya. Inogona kuve chero chikafu, saMueli. Unogona kurongedza chikafu chako. Kana kofi bhinzi, mabhegi achawedzerwa vavle. Makara anogona kusvika gumi. Saizi yakagadziridzwa newe.
muto. homwe inoshandiswa kwehupenyu hwedu hwezuva nezuva, inogona kuve nemhando dzakasiyana sauces, senge soya panya, nzungu sesame peta, garlic chili muto, bhinzi paste, oyster muto, nezvimwe.
Pashure: homwe yemvura
Zvadaro: homwe yezvipfuyo
yakakosha chimiro juzi homwe
vakamira hombodo chimiro homwe